Kraken စျေး - အွန်လိုင်း KRAK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Kraken (KRAK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Kraken (KRAK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Kraken ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Kraken တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Kraken များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
KrakenKRAK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0347KrakenKRAK သို့ ယူရိုEUR€0.0294KrakenKRAK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0265KrakenKRAK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0317KrakenKRAK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.315KrakenKRAK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.219KrakenKRAK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.767KrakenKRAK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.129KrakenKRAK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0461KrakenKRAK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0483KrakenKRAK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.784KrakenKRAK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.269KrakenKRAK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.184KrakenKRAK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.6KrakenKRAK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.5.82KrakenKRAK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0476KrakenKRAK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0523KrakenKRAK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.08KrakenKRAK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.242KrakenKRAK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥3.67KrakenKRAK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩41.29KrakenKRAK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦13.38KrakenKRAK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.55KrakenKRAK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.962
KrakenKRAK သို့ BitcoinBTC0.000003 KrakenKRAK သို့ EthereumETH0.00009 KrakenKRAK သို့ LitecoinLTC0.000598 KrakenKRAK သို့ DigitalCashDASH0.000399 KrakenKRAK သို့ MoneroXMR0.000396 KrakenKRAK သို့ NxtNXT2.85 KrakenKRAK သို့ Ethereum ClassicETC0.00487 KrakenKRAK သို့ DogecoinDOGE9.94 KrakenKRAK သို့ ZCashZEC0.000401 KrakenKRAK သို့ BitsharesBTS1.35 KrakenKRAK သို့ DigiByteDGB1.33 KrakenKRAK သို့ RippleXRP0.117 KrakenKRAK သို့ BitcoinDarkBTCD0.00123 KrakenKRAK သို့ PeerCoinPPC0.121 KrakenKRAK သို့ CraigsCoinCRAIG16.21 KrakenKRAK သို့ BitstakeXBS1.52 KrakenKRAK သို့ PayCoinXPY0.621 KrakenKRAK သို့ ProsperCoinPRC4.46 KrakenKRAK သို့ YbCoinYBC0.00002 KrakenKRAK သို့ DarkKushDANK11.41 KrakenKRAK သို့ GiveCoinGIVE77.01 KrakenKRAK သို့ KoboCoinKOBO7.86 KrakenKRAK သို့ DarkTokenDT0.032 KrakenKRAK သို့ CETUS CoinCETI102.68
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 07:00:01 +0000.